Ny mpanamboatra kitapo simenitra China dia manadihady ny fahombiazan'ny toetra mampiavaka ny mpanamboatra kitapo vita amin'ny plastika sy mpamatsy | Jintang
Ireo mpanamboatra kitapo simenitra dia mamakafaka ny fahombiazan'ny toetra mampiavaka ny kitapo vita amin'ny plastika
1, lanja maivana
Somary maivana ihany ny plastika amin'ny ankapobeny, ary ny hakitroky ny randrana plastika dia manodidina ny 0, 9-0, 98 g / cm3. Randrana polypropylene mahazatra ampiasaina matetika. Raha tsy ampiana mpameno dia mitovy amin'ny hakitroky ny polypropylene. Ny hakitroky ny polypropylene ho an'ny fampiharana fanenomana plastika dia 0, 9-0, 91 grama isaky ny centimetatra toratelo. Maivana mazàna dia maivana noho ny rano. Ny randrana plastika hery mahery vaika dia karazana fitaovana mahery vaika sy marefo amin'ny vokatra plastika, izay misy ifandraisany amin'ny firafitry ny molekiola, ny kristaly ary ny orientany amin'ny sary. Izy io koa dia misy ifandraisany amin'ny karazana additives. Raha ny hery manokana (tanjaka / hery misintona manokana) ampiasaina handrefesana ny randrana plastika dia avo kokoa noho ny na akaikin'ny akora vy izy io ary misy fanoherana simika tsara.
2, randrana plastika mifanohitra amin'ny tsy biolojika
Ny zavatra biolojika dia misy fanoherana tsara harafesina ambanin'ny 110 degre Celsius ary tsy misy vokany eo aminy mandritra ny fotoana maharitra. Manana fitoniana simika matanjaka izy io ho an'ny solvents, menaka sns ... Rehefa miakatra ny mari-pana dia afaka mivonto izany ny tetrachloride karbonika, xylene, turpentine, sns. Ny asidra azota mitifitra, asidra solifara fuming, singa halogen ary oksida mahery hafa dia hampihena azy io, ary manana fanoherana tsara harafesina manohitra alkaly mahery sy asidra ankapobeny.
3, fanoherana ny abrasion tsara
Ny coefficient an'ny disadisa eo amin'ny randrana plastika polypropylene madio dia kely, manodidina ny 0 na 12 fotsiny, izay mitovy amin'ny nylon. Amin'ny lafiny iray, ny disadisa eo amin'ny randrana plastika sy zavatra hafa dia misy vokany fanosorana.
4, insulated elektrika tsara
Ny randrana polypropylene madio dia insulator elektrika tena tsara. Satria tsy mandray ny hamandoana izy ary tsy voakasiky ny hamandoana amin'ny rivotra, avo ihany koa ny herin'ny rivotra malaky. Ny diélectrika tsy miovaova dia 2, 2-2, ary ny fanoherana ny habetsany dia avo dia avo. Ny insulation tsara amin'ny randrana plastika dia tsy midika hoe fampiasana azy amin'ny famokarana. Fampiasana fitaovana insulate.
5. Fanoherana ny tontolo iainana
Amin'ny hafanan'ny efitrano, ny lamba vita amin'ny plastika dia tena afaka tanteraka amin'ny fikaohon-tany, ny tahan'ny fandraisana rano ao anatin'ny 24 ora dia latsaky ny 0, 01%, ary ny fidiran'ny etona ao anaty dia ambany ihany koa. Amin'ny maripana ambany dia manjary marefo sy marefo izy io. Ny randrana plastika dia tsy ho voalefaka.
6. fanoherana ratsy fahanterana
Ny fanoherana efa antitra ny randrana plastika dia mahantra, indrindra ny fihantonan'ny polypropylene dia ambany noho ny randran'ny polyethylene. Ny antony lehibe mahatonga ny fahanterany dia ny fahanterahan'ny mangidihidy hafanana sy ny fanodinkodinana. Ny tsy fahaiza-miady amin'ny fahanterana amin'ny randrana plastika dia iray amin'ireo lesoka lehibe indrindra aminy, izay misy fiantraikany amin'ny androm-piainany sy ny sehatry ny fampiharana azy.
Fotoana fandefasana: Jan-29-2021
Kitapo valizy ambany, Pp Kitapo tenona, Kitapo fonosana simenitra eo ambanin'ny valizy, Pp Cement Block Valve ambany kitapo, Pp Fonosana, Kitapo misy lamina Bopp, Vokatra rehetra